Halgan Gudhiye: Geel Beele Geel Looma Dirsado – Rasaasa News
Sep 23, 2009 Jwxo-shiil, Somaliya
Mar aan maanta isha la dhexmaray boggaga Internetka ee ka soo jeeda dhulka Somalida Ogadeeniya, ayey ishaydu qabtay qormo ku qoran bog ka mid ah boggaga Jwxo-shill, oo uu magaceedu ahaa “ONLF iyo TPLF koodee ku guulaysan doona loolanka geeska africa” waa sida uu ciwaanku u qoran yahay qoruhu.
Waxaan is idhi ruuxa qoraalka qoray waxaa uu jecel yahay in uu sheego siyaasada murugsan ee geeska Afrika, mase leh aqoonteedii ama waa ruux jidbaysan [emotion]. Kolkaasu qalinku bilaabay in uu qoro waxa maskaxdayda dhex maaxanaya ee ku saabsan siyaasada saldhigi la,a ee geeska Afrika, kolkaas ayaan si gaar aha u sii dhawray ciwaanka saa waxaaba ku jirtay ONLF, waxayna ka hadlaysaa Jwxo-shiil iyo guulo uu u keeno siyaasada geeska.
17kii sano ee ay qoriga siday ONLF,waxaa ay ahayd intii ay burburtay Somaliya, waxaana dalkaas halaakeeyey colaado qabiil iyo ururo iska soo horjeeda. 2008 waxay ahayd markii iigu horeysay ee aan maqlay waxaa dagaal ku wada galay gudaha Somaliya ururka ONLF iyo kooxo Somali ah, waxaa aad uga naxay dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waxaa kale oo iyana ay qaadanwaa ku noqotay dadweynaha Jamhuuriyada Somaliya, oo ay ka iman jirtay taageerada ugu badan ee lagu wado halganka ay waday ONLF.
Colaada ONLF waxay ku wajahnayd Itobiya, waayo waxaa ay ONLF qoriga u qaaday in ay xorayso ummada Somalida Ogadeeniya, uma ayna qaadin in ay xabad ku dhufato shakhsi Somali ah nooca uu doono ha noqdee. Halganka dhulka Somalida Ogadeeniya waxaa soo gardaadiyey ummada Somaliyeed oo ku wayday dad iyo duunyaba, hadii ay cida dhaxalka Somalida O~gadeeniya qaadana waxaa leh dadweynaha Somaleed. Dhibaatada haysata dalka iyo dadka Somaliya ee ay ku hayso xukuumada Itobiya, waxaa ugu wacan Somalida Ogadeeniya, Jamhuuriyada Somaliya waxay ahayd walaalka weyn ee Somalida Ogadeniya, Itobiya waxay qaadatay go,aan ah si ayna Ogadeeniya u helin hiilo dambe dil Somaliya oo ah walaalka weyn ee Somalida Ogadeeniya.
Maamulada Somaliyeed ee ay Itobiya sida xun u adeegsto, waxay dhibaato u gaysteen dad ka soo jeeda Somalida Ogadeeniya, arintaas ONLF, uma arki jirin in ay tahay arin ay walaalahood kas ugu samaynayaan, mana ayna jirin sabab ay uga taxsi qaataan, waayo inta ay tarayaan ayaa ka badnayd waxyeeladooda.
Hadaba, sanooyinkii ugu dambaysay ayaa waxaa ay xukuumada Eritrea si xun u isticmaashay siyaasda ururka ONLF, waxayna heshay hogaan rabitaankiisu yahay hogaan ahaansho kaliya, laakiin aan lahaynaba aragti siyaasadeed oo dheer [far sight political vission]. Jwxo-shiil, waxaa loo sheegay in uu la colaatamo siyaasiyiintii halganka heer soo gaadhsiiyey, waxaa kale oo uu la colaatamay Sokeeyahay Somalda ah iyo waliba dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee degan Ogadeeniya. Arintaasi waxay khalkhal galisay aragtidii siyaasadeed ee ururka ONLF, waxaan suurto galiwayday xitaa in lagu dhaqmo shuurcdii uu ururku la,haa, kolkii af lagu kala bixi waayey lana arkay in uu ururka adimada la galayo xaalado aan lagu aqoon jirin, ayey qaar ka mid ahaa ragii ugu caansanaa halganku miciin bideen cadowgii ay la dagaalamayeen, khatar soo foodsaartay lafahooda darteed oo kaga imanaysay hogaanka ONLF iyo xukuumada eritrea.
Jwxo-shiil, oo ahaa hogaanka ururka ee xiliyadaas, waxaa uu xurmayn waayey xeerkii ONLF, waxaa uu xurmayn waayey magaciisii hore iyo da,ada uu yahay, waxaa uu xurmayn waayey rabitaanka beelaha Somalida Ogadeeniya, waxaa uu dhex fadhiistay ceeb hadii ay aduunka jirtay tii ugu xumayd, waxaa uu xagal haraatiyey halgankii ay ummadu ku soo daashay.
Jwxo-shiil, waxaa uu weerar ku qaaday Koonfurta Somaliya halkaas oo uu ku dilay dad badan, waxaana uu abuuray colaad beeleed, waqooyiga, badhatamaha Somaliya iyo waqooyi galbeed ee Somaliya waxaa uu ka abuuray colaado beeleed. Jwxo-shiil waxaa xabad la dhacay naftood hurayaal qaali ah oo ay ka wada tirsanaayeen ururka ONLF, waxaa uu xabad la dhacay xubnaha ururka JXSG.
Waxaa hal mar ooday jabsaday haaraamay Jwxo-shiil iyo inta la socota dadweynaha Somalda Ogadeeniya, waxaa hlgankii ku kala dhaqaaqay Naftood hurayaalkii halganka ku wada jiray, kuwaas oo uu beelbeel u qaybiyey. Waxaa cadowga mar labaad miciinsaday ciidamo aad u badan oo ay layahd ONLF, qaar badan oo ahaa Naftood hurayaalkii lagu soo tabobaray Eritrea ee ONLF, ayaa waxay qoryahoodii ula galeen maalmulada Somaliya. Waxaa arimahaas aad uga faa,iidaystay Maamulka kaalinka 5aad ee dhufayska u ah maamulka Tigray, waxaana u faa,iideeyey Jwxo-shiil, Jwxo-shiil iyo inta la socotaa maanta ma ay jirto meel ka mid ah geeska Afrika oo ay habeen ku dhuuman karaan, waa meelihii ay halganka ka wadeen 17 sano ee ugu dambaysay.
Somaliya, Itobiya waxaa ay ka dhigtay mid ay dirato iyo mid ay disho, mana muuqato sansaan siyaasadeed oo guul u keeni karta Somaliya sanooyinkan soo socda, waxaa kale oo aan muuqan sii socod halgan oo ay horseed ka tahay ONLF, sababaha aan kor ku soo sheegnay awgood “caano beele caano looma dirsado”, Jwxo-shiil, hadii uu siyaasad ku kordhin halganka ururka ONLF, kii Somaliya ayuu wax ka qaban lahaa xiligii ciidamada xooga leh ku haystay Somaliya.
Waxaa muuqata oo cad oo aan la qarin karaynin in ay heshay sidii ay Itobiya la jeclayd dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee ay hore uga weyday, balse ay ka heshay Jahuuriyada Somaliya, Maanta waxay haysataa ciidan ka soo jeeda Somalida Ogadeeniya oo xitaa hadii loo baahdo qaban kara Jamhuuriyada Somaliya. In ay arintu sidaas u dhacdo Itobiya kama shaqaynin balse waxaa ka shaqeeyey Jwxo-shiil, oo aan hubo in ay adag tahay in uu hor istaagi karo hal shakhsi oo ka soo jeeda Somalida Ogadeeniya iyo Jamhuuriyada Somaliya midna.